ट्रम्प शासनकालमा पुस्तकको बाढी किन ? | साहित्यपोस्ट
कार्लोस लोजादा	 आश्विन २६, २०७७ १३:०० मा प्रकाशित
अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनमा काम गर्ने, गरेका वा निकालिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो संस्मरण जारी गर्ने क्रम ह्वात्त बढेको छ ।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको छ, माइकल कोहेनको डिसलोयल । उनी ट्रम्पका निजी एटर्नी (वकिल)का रूपमा कार्यरत थिए । यतिबेला उनी जेलमा छन् । उनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कर छल्न र उनलाई जिताउन रकम जुटाउने मामिलामा आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतले दण्डसमेत दिइसकेको छ । उनको यो पुस्तक जेलमै तयार भएको थियो ।
ट्रम्पका सबैभन्दा नजिक र विश्वासपात्रका रूपमा कोहेन चिनिएका थिए । उनैले ट्रम्पबारे लेखेका छन्ः ‘मैले जिन्दगीमा ट्रम्पलाई नजिकबाट चिनेको छु । मैले ट्रम्पको वास्तविकता नजिकबाट नियालेको छु । उनलाई मैले नाङ्गामहिलाको क्लबको चरित्र देखेको छु, उनलाई अँध्यारा कोठामा गरिने अँध्यारा व्यापारका सम्झौताका बेलामा भेटेको छु र यस्तो बेला भेटेको छु जसका आधारमा म भन्न सक्छु, उनीजस्तो झूटा, बदमास, ठग, अरूलाई होच्याउने, छूवाछुत मान्ने, स्त्रीहरूलाई झम्टने कोही पनि देखेको छैन ।’
यसैगरी ह्वाइट हाउसकी पूर्व प्रेस सेक्रेटरी सारा हकाबी स्यान्डर्सले निकालेको ‘स्पिकिङ फर माइसेल्फ’ पुस्तक पनि बेस्ट सेलरमा आठौँ नम्बरमा छ । रोचक त के छ भने यो पुस्तक राष्ट्रपति ट्रम्पको पक्षमा लेखिएको छ । उनले किताबको प्रस्तावनामा नै लेखेकी छन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प, तपाईंले मेरो जीवन यसरी रातारात परिवर्तन गरिदिनु भएको छ, यसका लागि म कृतज्ञ छु । हुन त तपाईंका आलोचकहरूले तपाईंलाई अनेक थरिका फतुर लगाएका छन्, लगाउँछन् तर तपाईं इतिहासकै एक महान् राष्ट्रपतिका रूपमा रहनु र चिनिनु हुनेछ ।’
द न्युयोर्क टाइम्स	 असार २२, २०७७ ०६:००
यसैगरी बेस्ट सेलर सूचीमा रहेको अर्को पुस्तक कम्प्रोमाइज्ड पनि छ । हार्डकभर नन फिक्सनमा नम्बर आठमा रहेको यो पुस्तक पिटर स्त्रोजले लेखेका हुन् । उनी फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबिआई)का एजेन्टसमेत थिए । उनले हिलारी क्लिन्टनको इमेल काण्डलाई नजिकबाट अनुसन्धान गरेका थिए । ट्रम्पको निवार्चनका बेलामा २०१६ ताका रूसी ह्याकरहरूले ट्रम्पलाई जिताउन खेलेको भूमिका तथा इमेल काण्डको वास्तविकताबारे लेखेका छन् ।
यसबीचमा वासिङ्टन पोस्ट पत्रिकामा डोनाल्ड ट्रम्पका बारेमा यी चार वर्षे अवधि वा त्योभन्दा अलि पर्तिर छापिएका पुस्तकहरूका बारेमा कार्लोस लोजादाले खँगालेका छन् ।
उनी लेख्छन्, द वासिङ्टन पोस्ट पत्रिकाको गैर आख्यान (नन् फिक्सन) विधाको पुस्तक समीक्षक र आलोचकको हिसाबले यस अवधिमा मैले १५० भन्दा बढी पुस्तकहरू पढेँ, जसमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको उम्मेदवारी ताका भएका मुख्य छलफल कार्यक्रम बारे लेखिएका पुस्तक थिए । रमाइलो त के भने, किताबहरूको बारूदको थुप्रोमा यी त केही गोला मात्र थिए । यी किताब मतदाताको हृदय पगाल्नका लागि तयार पारिएका गोली थिए । थाहा छैन, यी गोलीले कत्तिको काम गर्ला ।
यीमध्ये केही राजनीतिक प्रतिरोधको घोषणापत्र थिए । संरक्षणवादको पैरवी गर्ने बहसको कला थिए । पहिचान तथा लैंगिक अधिकारमाथि लेखिएका थिए । ह्वाइट हाउसको गञ्जागोलको रिपोर्टिङ थिए । राष्ट्रपतीय संस्थामाथिको अध्ययनहरू थिए । अमेरिकी प्रजातन्त्रको भाग्य के हुने भन्ने भविष्यवाणी आदि पनि थिए ।
खासमा भन्ने हो भने ट्रम्पको चुनावले देशका राजनीतिक संस्थालाई हल्लाइदिएको थियो । यसले अमेरिकाका बुद्धिजीवी वर्गलाई धक्का दिएको थियो । लेखक, विचारक, अभियानकर्मी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक र पत्रकारले जसरी त्यसको प्रतिक्रिया दिएका छन्, त्यसले नै यत्तिका धेरै किताब ह्वारह्वारी निस्किएका हुन् भन्न गाह्रो मान्नु पर्दैन । दुर्भाग्य हेर्नुस्, यो देशका राष्ट्रपति जो किताब पढ्न रूचाउँदैनन्, उनैका बारेमा यत्तिका धेरै पुस्तक लेखिएका छन् !
यी किताबको सफलता फेरि कस्तो छ भने यी बेस्ट सेलर छन्, प्रकाशन गृहका हट केक बनेका छन् । बौद्धिक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ यी किताब खासै प्रभावशाली भने छैनन् । यी किताबमध्ये अधिकांश देखाउनका लागि निकालिएका छन् ।
अधिकांश किताबले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्, भनेका छन्- यो सामान्य हुँदै होइन, ट्रम्प शासक बन्न बिल्कुलै अयोग्य छन् । निकै कम पुस्तकले मात्र ट्रम्प उदयको मूल के हो ? किन उनी यहाँसम्म आइपुगे ? उनी यहाँसम्म आइपुग्नुको राजनीतिक स्रोत के थियो ? यी विषयसम्म पुग्नै चाहेका छैनन् । मात्र ट्रम्पको शासन भएन, उनी कल्पनाशीलता नभएका शासक बने भन्ने धारणा मात्र व्यक्त गरिएको छ ।
अमेरिकाका बुद्धिजीवीहरूले त्यही काम गरेका छन्, जुन यसअघि पनि हुने गरेका थिए । त्यो हो, संकट र भट्किलो यस समयमा बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो आरामकुर्सी त्यागेर एकान्तबास रोजेका छन्, स्वाभाविक आक्रोश प्रकट गरेका छन् र सहज भविष्यवाणी गरेका छन् । वैयक्तिक रूपमा ट्रम्प कालका पुस्तकहरूले हामी कहाँ कसरी अड्कियौँ र त्यहाँबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने उज्यालो बाटो र पाटो देखाउने प्रयास गरेका छन् ।
सन् २०१७ मा पत्रकार टकर कार्लसनले तपाईं के पढिरहनु भएको छ भनेर सोध्दा उत्तरमा ट्रम्पले भनेका थिए, ‘खासमा भन्ने हो भने मैले एउटा पुस्तक हेरिरहेको छु, म एउटा पुस्तक पढिरहेको छु, म पढ्ने प्रयासमा छु ।’
रोचक के छ भने एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तकका लेखक राष्ट्रपति अरूका पुस्तक भने पढ्न सक्दैनन् । त्यो धैर्य नै छैन । उनी जब राष्ट्रपतीय निवार्चनमा उठेका थिए, त्यो बेला उनको आधार नै पुस्तक थियो । उनको मुद्दा थियो- द आर्ट अफ द डिल पुस्तकका लेखकजस्ता अगुवा हाम्रो देशलाई चाहिएको छ ।
‘द आर्ट अफ द डिल’ उनको सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तकका रूपमा मानिन्छ । पत्रकारहरूले त्यो बेला त्यही पुस्तकभित्र ट्रम्पको दर्शन खोजिरहेका थिए । पुस्तकभरि उनी बदला लिने किसिमको, आत्ममुग्ध, पत्रपत्रिकाप्रतिको अविश्वासी, असुरक्षित व्यक्तिका रूपमा छरपष्ट भएका छन् भने झूटको पुलिन्दा र अन्यप्रतिको आक्षेप, आरोप आदि छन् ।
उनका पुस्तकमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो हुन्छ भन्ने पूरै भविष्यवाणी थिए तर ती पुस्तक नपढ्नेका लागि भने उनको राष्ट्रपतीय शासन आश्चर्य बनेर आएको ठानिरहेका छन् ।
पहिलो पटक ट्रम्प उदाउन सक्ने भविष्यवाणी गर्ने लेखिका थिइन्, अर्ली रसेल होसचाइल्ड । मानवशास्त्री अर्लीले स्ट्रेन्जर्स इन देयर अन ल्यान्ड पुस्तकमा अमेरिकाको तीव्र विकास र संसार दौडका बीचमा परित्यक्त नागरिकका बारेमा उनले लेखेकी थिइन् । उनीहरू शासकहरूबाट रिसाएका थिए । सेलेना जिटो र ब्राड टडको द ग्रेट रिभोल्ट पुस्तकमा ती जनताले कसरी विद्रोह गरे भन्ने प्रस्ट्याएका छन् भने बेन ब्राडली जुनियरले द फरगटनमा पेन्सिलभेनिया राज्यका डेमोक्रेट एक मतदाताको प्रोफाइल लेख्दै उनहरूले कसरी पार्टी परित्याग गरी ट्रम्पसँग मिले भन्नेबारेमा विस्तृत रूपमा लेखेका छन् ।
ट्रम्पविरोधी खेमाले लेखेका उपन्यासले उनको आगमनले दोस्रो अमेरिकी गृहयुद्ध निम्त्याउनेसम्मको भविष्यवाणी गरेका छन् । पहिलो गृहयुद्ध साम्य पार्न अब्राहम लिंकन आउनु परेको थियो । अब दोस्रो गृहयुद्ध हुँदा अमेरिका त्यस किसिमले सम्हालिन नपाउने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । रेडिकल होप, ह्वाट वि डु नाउ र हाउ डु आई एक्सप्लेन दिस टु माई किड्सजस्ता पुस्तकले देशको निराशाजनक अनुहार पेश गरेका थिए । यस्तोमा ट्रम्पपछि देश कस्तो हुन्छ भन्ने आँकलन गर्दै लिय ग्रिनबर्ग र एज्रा लेभिनले वि आर इन्डिभिजिबल लेखे ।
विपक्षी त विपक्षी भइहाले, स्वयं कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र पनि ट्रम्पका पक्ष, विपक्ष र त्यस बीचमा रहनेहरूले पनि किताब निकाल्न छाडेनन् । ट्रम्प राष्ट्रपति भएलगत्तै बीचमा रहेका हग हेविटले ‘द फोर्थ वे’ पुस्तक निकालेका थिए ।
पार्टीभित्रैका विपक्षीमध्ये चार्ल्स स्काइजले हाउ द राइट लस्ट इट्स माइन्ड, रिक विल्सनले एभ्रिथिङ ट्रम्प टचेज् डाइज्, म्याक्स बुटले द कोरोसन अफ कन्जरभेटिज्म र जेफ फ्लेक्सले कन्साइन्स अफ अ कन्जरभेटिभ जस्ता पुस्तक बजारमा ल्याए । यिनका किताब पढ्दा पार्टीका पुराना पुस्ता र साथीहरू ट्रम्प र ट्रम्प चुन्नेहरूप्रति साह्रै दुःखी छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छन् । तर ती सबै पुस्तकमा उनीहरूको शक्ति ट्रम्पलाई रोक्न किन खर्च भएन वा उनीहरूले भएभरको शक्ति किन लगाएनन् भन्ने प्रश्न भने उठ्छ । यो चाहिँ नहुनु भयो भन्नेहरूका लागि त्यो नहुनु रोक्न तिमीले के गर्यो त भन्ने प्रश्न गर्न ठाउँ राखेजस्तै हो ।
ट्रम्प पक्षका चूप लागेर बसेका होलान् त ? पक्कै पनि चुप लागेनन् । जसरी विरोधीको विरोध गर्ने अधिकार छ, त्यसैगरी पक्ष लिनेको पनि अधिकार छँदैछ । पक्ष लिनेले पार्टीको वैचारिक धारलाई मर्मत गर्ने हिसाबले लेखे । जसमध्ये इतिहासकार भिक्टर डेभिस हान्सनको द केस फर ट्रम्प प्रमुख छ । रिच लोरीले द केस फर नेसनलिज्ममाफर्त ट्रम्पको सही अडानहरूको व्याख्या गरेका छन् । यी पुस्तकमा ट्रम्पका वास्तविक र कृत्रिम दुवै दुस्मनका बारेमा लेखिएका छन् ।
चाहे ट्रम्प पक्षका हुन् या विपक्षका यी सबै पुस्तकको एउटै कमजोरी भनेको ट्रम्प केन्द्रमा हुनु हो । त्यस्तै पुस्तक पनि हिट भएका छन् । फायर एन्ड फ्युरी, अमेरिकन कार्नेज, अ भेरी स्टेबल जिनियस, द बेस्ट पिपल, फियर र रेजजस्ता किताब त्यसका पछिल्लो उदाहरणहरू हुन् । भविष्यमा डन म्यागहन, एन्थनी फाउसी, क्रिस्टेन निल्सन र रोबर्ट मुलरका पुस्तक पनि आउँदैछन्, जसले ट्रम्प प्रशासन भित्रका गुह्य कुराहरू निकाल्ने नै छन् । तिनले समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थ, जनस्वास्थ्य तथा इतिहासका पक्षमा कयौँ नयाँ कुराहरूको खुलासा हुने नै छन् । ती घटना किन भए र कसरी भए भन्नेबारेमा ती पुस्तकले जान्न भूमिका खेल्ने नै छन् । र, यो क्रम अब दशकौँसम्म ट्रम्पका नाममा खुलासा भइरहने नै छन् ।
ह्वाइट हाउसभित्र के भयो भन्ने कुरा खासै ठूलो कुरा होइन । यस्तो किन हुन पुग्यो र यस्तो हुनबाट भविष्यमा रोक्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पुस्तकहरू छलफल केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
यसको छाँट देखिइसकेको छ । जेनिफर सिल्भाको पुस्तक वि आर स्टिल हेयर त्यसको उदाहरण हो । डेभिड कोल र मेलेनी वाचेल स्टिनेटले सम्पादन गरेको पुस्तक रूल्स फर रेसिस्टेन्समा खिइँदै गरेको राजनीतिक प्रणालीमा के कस्ता सुधार आवश्यक छन् भनी खुट्याउने प्रयत्नहरू भएका छन् । एरिका लीको अमेरिका फर अमेरिकन्स, क्वामी एन्थनी एपियाको द लाइज द्याट बाइन्ड र पेट्रिसी खान कुलर्स र आशा बन्डेलेको ह्वेन दे कल यु अ टेररिस्ट, सुसन हेनेसी र बेन्जामिन विटेसको अनमेकिङ द प्रेसिडेन्सीजस्ता पुस्तकले राष्ट्रपति शासनका मिहिन गुणहरूलाई केलाउँदै त्यसका लागि लड्न प्रेरित गरेका छन् ।
त्यसैले पनि अहिलेलाई ट्रम्पबारे लेख्ने होइन, यसका अनेक कारणहरू खोतल्दै ट्रम्पजस्ता तत्त्व आउने बाटो के हुन् भन्ने खुट्याउने र तिनलाई रोक्ने बुझ्ने समय हो ।
(कोर्लोस लोजादा वासिङटन पोस्टको नन फिक्सन पुस्तकका समीक्षक हुन् । उनको नयाँ पुस्तक ह्वाट वेयर वि थिङ्किङः अ ब्रिफ इन्टेलेक्चुअल हिस्ट्री अफ द ट्रम्प एरा पुस्तकको संक्षेपीकरण ।)
कार्लोस लोजादाडोनाल्ड ट्रम्प
कार्लोस लोजादा 1 लेखहरु 10 comments
थोमस पिकेटी र युवल नोह हरारी सिनेमा हलमा ! नयाँ ट्रेन्ड बस्दै !